घरबाटै बिक्छन् फोहोर
तपाईंका घरमा दैनिक एक किलोभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ ? फोहोरका रूपमा के–के फाल्ने गर्नुभएको छ ? प्लास्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा ? वा कुहिने फोहोर र बासी खाना पनि ?
प्रमुख सत्तारूढ नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
परीक्षा सञ्चालकको पारिश्रमिक वृद्धि
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न हुने शिक्षक, कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको छ ।
लिम्बूको उद्धार गर्न ब्लडमनी संकलन सुरु
झन्डै ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ ब्लडमनी र क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेर साउदी अरबबाट निस्कन नसकेका प्रशान्त लिम्बूलाई उद्धार गर्न प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले सोमबारदेखि आर्थिक सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेको छ ।
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो बनाउन बीस लाख
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुने पाक्षिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ ।
‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ’, केही समयअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पौडेल र सिटौलाबीच अविश्वास कायम रहेको देखिन्छ ।
प्रतिबन्धित औषधी छ्यापछ्याप्ती, वितरकसहित पसलवाला पक्राउ
औषधी विभागमा दर्ता नभएका र चिकित्सकको पुर्जा बिना विक्री गर्न नपाइने औषधी पूर्वका फार्मेसी पसलमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको छ ।
ढलमा फोहोर पानी मिसाउँछन् ठूला अस्पताल
भिष्मराज ओझा, रासस
संघीय राजधानीका ठूला अस्पतालले नै फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिधै सार्वजनिक ढलमा मिसाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
इँटा उद्योगमा बालश्रम अन्त्यको घोषणा
मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बालश्रम अन्त्य भएको सार्वजनिक घोषणा गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धताको घोषणा गरे ।
बालुवा झिक्ने स्वरुप फेरिँदै
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन उद्योग सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपनि कामदार लगाएर बालुवा झिक्ने कार्य रोकिएको छैन । बालुवा झिक्ने स्वरुप फेरिंदै गएको छ ।
सामान्यतया बिजुलीको सुविधा भएका ठाउँमा केही समयको लोडसेडिङले पनि जनजीवन प्रभावित हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्वनिधत निकाय माथि तत्कालै उपभोक्ताहरु तीब्र आक्रोश पोख्न थाल्छन् ।
सुनुवाई समितिको बैठक फेरी सर्‍यो, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने सत्ता पक्षका सांसदको अडान
दुर्गा खनाल, कृष्ण ज्ञवाली
प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस दीपकराज जोशीकोबारे निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक सोमबार पनि निर्णयमा पुग्न सकेन । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशकाे सुनुवाइ ढिलाइले सरकारकाे नियतमा शंका : डीएलए
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए–नेपाल) ले संघीय र प्रदेश संसद्‌मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने संवैधानिक व्यवस्था सत्तारुढ दलले उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
विपद्का घटनाबाट वैशाखयता ४ सय ५५ को मृत्यु
चार महिनामा विपद्का घटनाबाट मुलुकभर ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७५ वैशाख १ देखि साउन १२ सम्म डुबेर, आगलागी, डुंगा सवार, बाढी, पहिरो, लेक लागेर, चट्याङलगायतका विपद्का घटनाबाट ज्यान गएकाे हो ।
सुनुवाई समितिको बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीशबारे सांसदहरु अझै अनिर्णत
प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस दीपकराज जोशीकोबारे निर्णय गर्न सोमबार दिउँसो २ बजे संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक बस्ने समय दुई घण्टा बाँकी हुँदा पनि सांसदहरु भने अनिर्णित नै छन् ।
दाहाल र चिनियाँ उपमन्त्री चिङबीच भेट
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री वाङ या चिङ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएकाे छ । सोमबार बिहान दाहाल निवास खुमलटारमा भएको भेटमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा चिनियाँ सहयोगका बारेमा कुराकारी भएको छ ।
डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनमा अधिकारी निर्वाचित
गैंडाकोटमा सम्पन्न कांग्रेस निकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) मा योगेन्द्रबहादुर अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४३१ मत पाएर बिजयी भएका छन भने प्रतिद्धन्दी सिताराम केसीले ३ सय ६४ मत पाएका छन् ।
निर्मला हत्या प्रकरण : चार दिनपछि दाहसंस्कार
गत शुक्रबार उखुबारीमा मृत भेटिएकी भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी निर्मला पन्तको शव सोमबार आफन्तले बुझेका छन् । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा राखिएकाे शवकाे ४ दिन पछि आफन्तले दाहसंस्कार गरेका छन् ।
सम्बन्धन विरोधमा विश्वविद्यालय ठप्प
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनले ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले १९ दिनदेखि विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पस ठप्प पारेका छन् ।
मुटु उपचारको बजेट रोकियो
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि भेरी अञ्चल अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको मुटु उपचार बजेट रोकेको छ । औषधि अभावले बिरामीको उपचारमा बाधा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी महँगो औषधि किन्न नसक्दा सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
सिद्धबाबामा सधैं त्रास
तानसेन–बुटवल सडकअन्तर्गत सिद्धबाबा खण्ड जम्माजम्मी चार किलोमिटर हो । यही छोटो दूरीमा दुर्घटनाको शृंखला भने निकै लामो छ । ११ वर्षमा ५१ दुर्घटना हुँदा ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
बिमस्टेक तयारीमा अन्योल
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको तयारीमा जुटेको परराष्ट्र मन्त्रालयले हल, भीआईपी पाहुनाका लागि गाडी, रिट्रिट स्थललगायतको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।
विश्वकै पैदले सहर बन्ने लन्डन
बेलायतको राजधानी लन्डनलाई विश्वकै पैदलयात्रीमैत्री सहर बनाइने भएको छ । लन्डनका पैदल तथा साइकल आयुक्त विल नम्र्यानले सार्वजनिक गरेको ‘पैदल कार्ययोजना’ मा सहरको वातावरण सुधारिने, वायु प्रदूषण घटाइने र पैदलयात्रीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।